बिवाहपछि किन मोटाउछन् केटी ? यस्तो रहेछ कारण
रोचक बिवाहपछि किन मोटाउछन् केटी ? यस्तो रहेछ कारण
Nepal Online Patrika: तपाईले स्कुल र कलेजमा देखेका केटी साथीलाई विवाह पछि देख्नु भयो भने चिन्न समस्या पर्छ होला । उनीहरुको शरीर निकै मोटाएको पाउनु हुन्छ होला ।
अक्सर तपाई विवाहपछि महिलालाई मोटाएको देख्नु भएको होला ।
तर विवाहपछि किन महिला मोटाउने गर्दछन् त खासमा विवाहपछि महिलामा घरगृहस्थीको कामकाजले दैनिक जीवन बदलिने गर्छ । उनीहरु प्रेम वा विवाहको तनावबाट मुक्त हुन्छन्न् ।
कतिपय महिलाले विवाह अघिसम्म मात्र सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने सोचाई हुने गर्दछ । विवाहपछि भने उनीहरु सुन्दर बन्न खासै प्रयत्न गर्दैनन् ।
हुनत ब्यस्तताका कारणले पनि आफुलाई फिट बनाउन महिलाले सकिरहेका हुदैनन् । तर जुन आर्कषक शरीर देखेर श्रीमानले मन पराएरका हुन्छन् उनिहरु पछिसम्म पनि त्यहि फिटनेस आफ्नो श्रीमतीमा खोज्ने गर्दछन् ।
तर श्रीमती मोटाएको कारणले श्रीमानको आर्कषण घट्ने गर्दछ । यसले उनीहरुमा नैराश्यता समेत उत्पन्न गराउँछ । र त्यहि नैराश्यता श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव बढाउने कारण पनि बन्न सक्छ ।
यस्ता छन् विवाहपछि मोटोपना घटाउने १५ उपाय:
1.मोटोपन घटाउन नियमित टाइमटेबल तथा सेड्युल तयार पारेर समय दिनु पर्दछ । 2.सकेसम्म चिल्लो, तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुरा खान त्याग्नुहोस् । 3.नियमित झन् मोटाउदै जानु भएको छ भने उसिनेको खानेकुरा मात्र सेवन गर्नुहोस् । 4.बाहिर होटल तथा रेष्टुरेन्टको खानेकुरा, फास्टफूड, जंकफूड नखानुहोस् । 5.एकै पटक धेरै खाने नगर्नुहोस् बरु थोरै थोरै तर धेरै पटक खानुहोस् । 6.विहान विहान पैदल हिँड्न प्रयास गर्नुहोस् साथै हल्का कसरत पनि गर्नुहोस् । 7.ओखर, दहि सेवन गरेमा पनि केहि हदसम्म मोटोपना कम हुन जान्छ । 8.खानामा सकेसम्म बढि मात्रामा तरकारी र खाजामा फल खाने बानि बसाउनुहोस् । 9.विवाहपछि महिलाहरु व्रत बस्ने गर्दछन्, धेरै व्रत बसेमा समेत मोटाउने गरीन्छ । 10.दैनिक गर्ने कार्य र खानाको समेत तय गरी सुचि बनाउने । 11.विहान आधाघण्टा जगिङ्ग जाने वा वर्कआउट गर्ने । 12.आफ्नो वजन घटाउन पार्टनरबाट उत्प्रेरणा माग्ने । 13.नियमित रुपमा पहिलेका पहिरन लगाई आफुमा आएको परिवर्तन हेर्ने । 14.व्लड प्रेशर, सुगर लगायतका स्वास्थ्य समस्या नियमित परीक्षण गर्ने । 15.मोटोपना घटाउन खाना कम गर्ने र ब्यायाम ज्यादा गर्नुहोस् ।
के तपाइ तनावमा हुनुन्छ ? दिमागी सन्तुलनका लागी यसो गर्नुहोस्:
मानिसहरुले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागी धेरै सपनाहरु देखेका हुन्छन् । उनीहरु जीवनमा केहि कुरा हाशिल पनि गर्न चाहन्छन तर ति कुराहरु पाउन वा सफलता प्राप्त गर्न त्यति सजिलो पनि हुदैन । त्यसको लागी धेरै परिस्थितिहरुको सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जीवनमा अघि बढ्ने क्रममा साना ठुला समस्याहरुको सामना गर्दै जादा दिमागमा पनि अनेक कुराहरु खेल्ने गर्छन ।
जस्तै : मा यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिन होला, अब यसपछि फेरी कस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्ने होला, यस्तै यस्तै कुराहरु मनमा खेलिरहन्छन । जब मानिसहरुको मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्दछ तब ऊ डिप्रेसनमा जान सक्दछ । यसले गर्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ख्यालमा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ । यदि मनमा धरै कुराहरु खेलिरहेका छन् भने आफ्नो मन मिल्दो साथीभाईहरु सग त्यो कुरा शेयर गर्ने गर्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईको मन हल्का हुन्छ ।
आजकल मानिसहरु धेरै तनावमा रहने गर्दछन । आफ्नो घर परिवारलाई लिएर तनावमा हुन्छन भने कतिपय आफ्नो करियरलाई लिएर तनावमा रहेका हुन्छन । त्यसैले आज हामी यस्ता कुराहरुलाई मध्य नजर गर्दै यस्ता समस्याहरुबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने बारे चर्चा गर्न गईरहेका छौ । तनावमा रहिरहनु भनेको एकदमै गम्भीर समस्या हो त्यसैले हामीले यसलाई सामान्य रुपमा लिनी हुदैन ।किनकि तनावमा रहेका कारण मानिसहरुबाट अप्रिय घटनाहरु पनि घट्ने गर्दछ ।
१. लेख्ने बानीको विकास गर्नु:
2. आफ्नो लागी ठाउ बनाउनुहोस्:
मानिसहरुको कस्तो बानी हुन्छ भने उनीहरु आफ्नो बारेमा भन्दा बढी अरुको बारेमा सोचेर तनावमा आउने गर्दछन । त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा आफुलाई महत्व दिनुहोस । आफुले गर्ने कामहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्नुहोस् । जतिबेला पनि काम मात्र भनेर नबस्नुहोस। मनोरंजनका लागी पनि समय निकाल्नुहोस ।
हप्तामा एक पल्ट साथीभाईहरु संग वा आफ्नो परिवार संग कतै रमाइलो ठाउमा घुम्न जाने गर्नुहोस् । बिभिन्न चाडपर्वहरुमा मन खोलेर रमाउने गर्नुहोस् । हरेक कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा एउटा सकारात्मक उर्जा आउछ र नकारात्मक बिचारहरुले तपाईमा ठाउ पनि पाउदैनन ।
३. जीवनको लागी प्राथमिकता छुट्याउनुहोस्:
सबैभन्दा सुरुमा तपाइले गर्ने काम र तपाईको जीवनको महत्वपूर्ण कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् । किनकि आफ्नो जीवन आफैले बनाउने हो त्यसैले प्राथमिकताहरु छुट्याउन एकदमै जरुरी हुन्छ । तपाईको लागी महत्वपूर्ण के छ त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्नुहोस् । अरुले आफ्नो बारेमा के भन्छन भनेर नसोच्नुहोस ।
यसले गर्दा तपाइँसंग अनावश्यक कुराहरुको लागी समय पनि हुदैन र तपाईको इज्जत पनि बढ्दै जान्छ । यसरी आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्दै जानुभयो भने करियरमा सफल पनि बन्नुहुनेछ । त्यसपछि तपाईको दिमागबाट अनावश्यक कुराहरु पनि घट्दै जान्छ र तपाईको समाजमा पनि एउटा राम्रो छाप बस्ने छ ।
४. सम्बन्ध बिस्तार गर्नुहोस्:
५. काम गर्ने बानीको बिकास गर्नुहोस्:
६. तालिका बनाएर काम गर्नुहोस्:
७. व्यक्तित्व बिकासमा लगानी गर्नुहोस्:
आफु बस्ने ठाउ, आफुले काम गर्ने ठाउ सफा र सुन्दर राख्नुहोस् । बिभिन्न सभा तथा सेमिनारहरुमा सहभागी हुने गर्नुहोस् । यसले तपाइ नयाँ कुराहरु सिक्न पाउने हुनेछ । नयाँ साथीहरु बनाउन पाउने मौका पनि पाउनेहुनेछ । नयाँ कुरा सिक्ने तालिमहरु खुलेको ठाउमा सहभागी हुन जानुहोस ।
आफुलाई आर भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुहोस् । नयाँ – नयाँ कुराहरुसंग अपडेट रहनुहोस् । तपाईमा जति धेरै कुराहरुको जानकारी हुन्छ त्यति बढी तपाईमा राम्रा कुराहरु आउन थाल्नेछन । पुस्तकहरु खोजि खोजि पढ्ने गर्नुहोस् । यस्ता कामहरु गरिरहदा तपाइँ संग अनावश्यक कुराहरु सोचेर बस्ने फुर्सद पनि हुदैन र तपाइँ एक सकारात्मक बिचार लिएर अगाडी बढ्न सक्नुहु
८. शारीरिक अभ्यास र योगा गर्नुहोस्:
त्यसैले के समस्या छ त्यसबारे खोजी गर्नुहोस् । त्यसको समाधान के छ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्न थालिहाल्नुहोस । यसो गर्नाले तपाइँ एक स्वस्थ, सुन्दर जीवन बाच्न सक्नुहुनेछ । आफु र आफ्नो परिवारलाई तनाव मुक्त राख्नुहोस् । सधै दिमागमा सकारात्मक कुराहरू राख्नुहोस् । जतिसक्दो नकारात्मक कुराहरुबाट टाढै नै बस्नुहोला । किनकि सकारात्मक सोचले नै तपाईलाई उज्यालो पाटोतर्फ लैजान्छ ।